Isitovu saseDatshi, iiSkillets, iGrill Pan, iCasserole-DINSEN
HAYI KUPHELA INDODA KODWA INDLELA
YOBOMI DINSEN Umdali wobomi obungcono
I-Dinsen Impex Corp ijolise kuphuculo oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha kuphuhliso lwezinto zokupheka zentsimbi, ubugcisa kunye nemveliso. Ngeli xesha sikwabonelela nge-OEM, i-ODM, kunye nezinye iinkonzo.
Umzi mveliso wethu uyamkelwa yi-ISO9001: 2015 kunye ne-BSCI, kwaye ixhotywe ngemigca yokuphosa i-DISA-matic kunye nemigca yemveliso yangaphambi kwexesha, imigca yoqweqwe lwawo, kunye nezixhobo zovavanyo olupheleleyo. Ngombulelo kumaziko emveliso yanamhlanje, amaziko afanelekileyo okhuselo lokusingqongileyo, iinkqubo zemveliso esemgangathweni, amagcisa kunye nenkqubo yovavanyo olupheleleyo, iimveliso zethu zokupheka zentsimbi ziye zathunyelwa kumazwe angaphezulu kwama-20 ngokukhawuleza kunye nemimandla enje ngeJamani, iBritane, iFrance ne-United States, njl. kwaye sakhe intsebenziswano yexesha elide kunye nabathengi bethu. I-Dinsen iya kugcina iinjongo zokuphucula umgangatho wobomi bomntu, ukusebenza ngokubambisana nabathengi bethu kunye noogxa bethu ekhaya nakwamanye amazwe, ukuphuhlisa nokuthengisa phambili, ngakumbi ngobungcali, nangakumbi ngokusingqongileyo.
DA-C25001 / 29001/33001/37001 waphosa intsimbi eliphezulu q ...
DA-DO21001 / 25001/29001 kwizinga eliphezulu cast intsimbi ...
I-DA-DO31001 i-cookware yentsimbi yentsimbi 2020 intengiso eshushu
I-DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 cast ...
I-DA-S26001 yenziwe nge-china yaphosa i-iron yentsimbi 2020 eshushu
I-DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 yentsimbi iphosa i-eco -...
DA-S22002 / DA-S20005 eco-friendly uphose intsimbi c ...
DA-BC37001 2020 yokuthengisa eshushu cookware ezenziwe c ...
I-DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 intsimbi yentsimbi ...
Sikwabonelela ngeenzuzo ezinkulu kubo bonke abathengi bethu, zombini ezitsha kunye nokubuya. Zive ukhululekile ukujonga ngakumbi izizathu zokuba ube ngumthengi wethu kwaye ube namava okuthenga ngaphandle kobunzima.
Imvula enkulu eHenan
Kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, iZhengzhou, Xinxiang, Kaifeng kunye nezinye iindawo kwiPhondo laseHenan ziye zafumana imvula enkulu kakhulu. Le nkqubo ibonakalise iimpawu zemvula enkulu eqokelelweyo, ixesha elide, imvula enamandla yexesha elifutshane, kunye nokugqithileyo okubalaseleyo. Umbono weMeteorological oMkhulu ... / p>
NgoJuni 28, 2021
UDinsen ubhiyozela isikhumbuzo seminyaka eli-100 sokusekwa kweQela lamaKomanisi lase China！
Iminyaka elikhulu, uhambo lwamahla ndinyuka. Ukusuka kwisikhephe esincinci esibomvu ukuya kwinqanawa enkulu eya kukhokelela kuzinzo lwase China kunye nohambo lwexesha elide, ngoku, iqela lamaKomanisi lase China ekugqibeleni lingenise usuku lwayo lokuzalwa. Ukusuka kwiqela lokuqala likaMarx elinamalungu epati angaphezulu kwama-50, ine ... / p>